5 Xirmo Bulukh Burush oo loogu talagalay Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Axad wanaagsan, bulshada hal abuurka leh! Maanta waxaan kuu keenayaa xirmo kheyraad oo ku anfacaya. Marka laga shaqeynayo halabuurka halka qoraalka iyo daaweynta waxyaabaha dabiiciga ah ay door muhiim ah ka ciyaarayaan, waxaa lagama maarmaan ah inaan heysano kheyraad iyo agab awood leh oo awood u leh inaan ku helno natiijooyinka ugu fiican. Marka laga hadlayo ka shaqeynta madadaalada daruuraha iyo jawiga cufan sida ceeryaanta, waxaan isku halleyn karnaa qalabka sida daruur filter (oo aad horey u ogtahay inaad ka heli karto Filterka> Tarjumaadda> Daruuraha menu), in kasta oo haddii aan dooneyno inaan si qoto dheer u soo bandhigno, firfircoonaanno iyo kala duwanaanta qaababkeenna, waxaa aad loogu talinayaa inaad isticmaasho burushyo gaar ah.
Maantana waan ku keenay shan baako Aad u xiiso badan oo ka kooban noocyo kala duwan oo ah burushyada daruuriga ah iyo dusha sare ee suufka ah taas oo awoodi doonta inay daboosho baahiyahaaga marka aan ka shaqeyno mashruucan noocan ah. Baakad kasta waxay ka kooban tahay xulashooyin kala duwan oo ku fiicnaan kara ka shaqeynta cufnaanta, muuqaalka iyo qaababka kala duwan. Qaar ka mid ah waxay ka kooban yihiin qaabab daruur shaqsiyeed iyo waliba kooxo daruuro ah oo samaysanaya aagagga cirka. Maaddaama aan dhibaatooyin la kulannay inaan ka soo dejino waxyaabaha ka jira server-ka Google Drive, markan waxaan u soo galiyay xirmooyinka 4shared anigoo rajeynaya inaysan dhibaato jirin. Sikastaba, hadii ay dhibaato timaado iga dhaaf faallooyin waana fiirin doonaa. Waxaan rajaynayaa inaad u aragto inay faa'iido badan leedahay oo aad ka faa'iideysan karto qalabkan ... Ilaa waqtiga xiga!
5 Xirmo Daruuro Bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop: http://www.4shared.com/rar/-nxJSFqVba/Nubes-pack.html
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Burush » 5 Xirmo Bulukh Burush oo loogu talagalay Adobe Photoshop